Ibhedi kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Ibhedi kunye nesidlo sakusasa
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSilke
Singqongwe ngumhlaba omhle ngendlela emangalisayo, oyilwe ziiNtaba noLwandle. Iibhedi ezitofotofo, amagumbi apholileyo kunye nomlilo ovulekileyo kwisidlo sakusasa, qinisekisa ukuhlala ngokukhululekileyo.
Ungalibali, ukuhamba ngemizuzu emi-2 kuyakusa kwindawo yethu yokutyela kunye nakwii-pubs.
Sinikezela ngamagumbi eendwendwe ezine ze-en-suite ezinebhedi ephindwe kabini okanye iibhedi ezingamawele, nceda ubuze usapho kunye nendawo yokuhlala elungele izilwanyana. Ixabiso li-2 abadala kwigumbi ngalinye.
Sihlala kwindawo ekude kakhulu. Ilungele ukuhamba, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokufota, intaka/itywina/i-otter/umnenga, okanye ukonwabela nje iimbono.
Abantu banobuhlobo kwaye bayanceda kulo naluphi na uhlobo lonxunguphalo.
Iindlela ubukhulu becala ziyingoma enye kwaye imbeko igcina wonke umntu onwabile. Iigusha, amatakane, amaxhama kunye neenkomo zasezintabeni ziyazulazula kwaye zisebenzisa iindlela rhoqo, abakhweli beebhayisikile nabahambi ngeenyawo baya kuba nombulelo ngokuqhuba ngononophelo, nabo.
IPosi liziko lelali elinekhefi encinci, ivenkile, ukutya kunye neenkonzo zebhanki kunye neposi.
Iihotele zasekhaya ngaphezulu kwebha kunye nesidlo sakusasa, isidlo sasemini, kunye nedinala ezineodolo yokugqibela phakathi kwe-8.30-9.00 pm. Ngeempelaveki nangexesha lasehlotyeni kukho ithuba elihle lomnye umculo ophilayo.
Ulwimi yilali enendawo entle kunye nesiqalo esigqibeleleyo seMunro kunye nokuhamba endulini. Iipeatlands zeMoine Flow Country ziyamangalisa, iindawo ezivulekileyo ezijikelezwe ziintaba kunye nolwandle. I-Kyle yolwimi kunye nokufikeleleka ngokulula kwiilwandle ezintle zilungele ukubona izilwanyana zasendle, ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukusefa umoya, ukuntywila emanzini, ukukhwela ibhayisekile okanye ukuphumla nje.
Kwaye ukugqiba usuku lwakho, kutheni ungazami i-Kyle ye-oyster yolwimi, i-Loch Erribol Langoustines, ii-lobster zasekhaya, ii-mussels, i-salmon okanye ukhetho lwesidlo sangokuhlwa!
Siyakuthanda ukuloba, ukukhwela induli, ukukhwela ibhayisekile kwaye siya kunceda nangayiphi na indlela esinokuyenza ngayo. I-Kyle of Tongue Holiday Park iyarenta ibhayisekile kwaye isekethe yaseKyle yaseTongue ithandeka kwaye izolile kumjikelo weemayile ezili-13 ukusuka kwindlela enkulu yoNxweme olukuNxweme lwama-500.
Siyakuthanda ukuloba, ukukhwela induli, ukukhwela ibhayisekile kwaye siya kunceda nangayiphi na indlela esinokuyenza ngayo. I-Kyle of Tongue Holiday Park iyarenta ibhayisekile kway…